Ku rakib arjiga
Soo gal ama isdiiwaangeli
Aagga Gaarka ah
Ku dar rukhsad bilaash ah
Hay'adda guryaha iibisa
Shirkad wax geynaysa
Bakhaarka alaabada cayaaraha
Bakhaarka nafaqada isboortiga
Iskuulka kubada cagta
Naadiga fanka dagaalka
Naadiga jir dhiska
Naadiga kubada cagta
Naadiga la dagaallama
Cunto dhakhso leh
Dayactirro kala duwan
Xarunta adeegga dayactirka
Bakhaarka dharka ee khadka tooska ah ee 'Instagram'
Bakhaarka dharka isboortiga
Dukaanka dharka dhogorta leh
Dukaanka dharka iyo kabaha
Dukaanka dharka ragga
Dukaanka dharka shaqada
Dukaanka dabaqyada dedan
Barkadda dabaasha ee carruurta
Cunnada waddooyinka carruurta
Hal abuurka caruurta
Iskuulada kubada cagta ee caruurta
Istuudiyaha sawirka carruurta
Naadiga isboortiga ee carruurta
U shaqee carruurta
Xarunta waxbarashada carruurta
Bakhaarka alaabada guriga
Bakhaarka alaabta guriga
Bakhaarka alaabta korontada
Bakhaarka diiwaanka Vinyl
Bakhaarka qalabka guryaha
Dukaan alaab ah
Dukaan caan ah
Dukaan qiimo go'an
Dukaanka farsamada gacanta
Dukaanka injineernimada fayadhowrka
Dukaanka maadda ah
U dukaamee macmacaanka
Bakhaarka qalabka baabuurta
Bakhaarka qaybaha baabuurta
Taayirada ku habboon
Mashiinnada otomaatiga ah
Naadiga Milyaneerka ah
Bakhaarka ku habboon
Soo saarida alaabada kiimikada otomaatiga ah
Soo saarida qalabka dhismaha
Soo saarista dharka
Soo-saarista alaabada caagga ah
Soosaarida dhismayaasha birta
Soosaarida waraaqda musqusha
Wax soo saarka fur fur is-siyoodba
Wax soo saarka garoomada ciyaarta
Wax soo saarka kiimikada guriga
Wax soo saarka leben jilicsan
Wax soo saarka ranjiga
Wax soo saarka sharaabka
Wax soo saarka Trailer
Wax soosaarka qashinka
Celcelis ahaan Akhtuba RP
dhagax on obi ah
Dhul bikro ah
Geed kedar ah
Haro isdabajoog ah
Marwada duqda ah
Midab khafiif ah
Qorrax ka soo bax
Si kedis ah
Biyaha Jaalaha ah
Harooyinka qalloocan 2
Lacag bilow ah
Ma jiro lacag bixin wadar ah oo bilow ah
Maalgashi ayaa loo baahan yahay $
Maalgashiga ugu yar ilaa $ 500
Shirkadaha ugu jaban ee ka hooseeya $ 1000
Shirkadaha qiimaha jaban ilaa $ 2000
Maalgelin yar oo ka yar $ 4000
Jaban oo laga jari karo illaa $ 10000
Kala wareeji maalgashiyo yaryar illaa $ 20000
Dhaqaajinta dhaqaalaha ilaa $ 30000
Ka jarista yaryar ilaa $ 40000
Ganacsi xayeysiis waa qaali ka yar $ 50000
Ganacsi leh maalgashi ilaa $ 75000
Lacag weyn oo laga jari karo ilaa $ 100,000
Wareegyo waaweyn oo ka badan $ 100,000
Iibinta Franchise oo leh royalty
Franchises leh lacag celin degdeg ah - 1 bil gudahood
Wareegtada lacag-bixinta degdegga ah - laga bilaabo 1 bil illaa 3 bilood
Dib u bixinta lacag bixinta ee laga bilaabo 4 bilood ilaa 1 sano
Muddada lacag celinta ee xayeysiintu waa in ka badan 1 sano
Waxaad dooran kartaa qiimayaal badan
Magac bixinta magaalada
Magaalooyin yaryar, degsiimooyin yaryar, magaalo yar
Lahaanshaha guriga. Waxaad ka shaqeyn kartaa guriga
Ka jarid ku meelgaar ah
Franchise loogu talagalay xayawaanka
Baahida loo qabo rukhsadaha
Faa'iido, xayeysiisyada ugu faa'iidada badan
Fur dukaan faransiis ah
Dukaamo alaabo jaban leh
Xuquuqda internetka, dukaanka internetka
Franchise ka xoq
Lacag bixin bilaash ah
Ganacsi diyaar ah
Intee in le'eg ayuu ururku shaqeynayay
1 ilaa 3 sano jir
4 ilaa 10 sano jir
11 ilaa 20 sano jir
In ka badan 20 sano
Ku raadi magaca summada iyo qoraalka xayeysiiska. Waxaad kaloo ku raadin kartaa qoraaladaada.
Diiwaangeli ama gal si aad u isticmaasho macluumaadka shaqsiyeed
Waxaa jira calaamad
Calaamad ma laha
Si aad ugu jeceshahay
La soco hadhow
Waxaa jira qoraalo
Qoraallo ma jiro
Cabasho ayaa jirta
Cabasho ma jirto
Waxaa jira waraaqo
Warqaddii waa la daawaday
Warqadda lama fiirin
Warqaddii waa laga jawaabay
Warqaddii looma jawaabin
Farriimo cusub baa ii jira
Muuji dhammaan shuruudaha raadinta
Xayeysiis la helay: 983
USU - Nidaamka Xisaabaadka Caalamiga ah
Lacag bilow ah: 0 $
Maalgashi ayaa loo baahan yahay: 0 $
Dib u bixinta Tirada bilaha: 1
Qeybta: Barnaamijyada, Xisaabinta
Barnaamijyada nooc kasta oo ganacsi ah! Suuragal maaha in ganacsi la'aan softiweer uu xakameeyo shaqada shirkad iyo dhammaan qeybaha waxqabadka. Maalin kasta shirkad noocan oo kale ah waxay la kulanto khasaaro aad u weyn maxaa yeelay ma falanqeyn karto daciifnimadeeda mana hagaajin karto. Xidhiidhka daciifka ahi wuxuu noqon karaa wax kasta: shey aan caan ahayn oo ururku sii wado inuu iibsado iib; adeeg aan keenin faa'iidada laga filayo xayeysiinta xun; shaqaalaha shirkadda, oo waxtarkooda shaqo uusan ku filnayn; iyo waxbadan. Noqo wakiilkayaga wadankaaga ama magaaladaada oo kasbo qaybta ugufiican - ganacsiga!
Ma jiraa fiidiyow
Waxaa jira sawirro
Eeg sharaxaad buuxda
Waxaad iibsan kartaa gelitaanka caymiska si aad u aragto tirakoob faahfaahsan
Maalgashi ayaa loo baahan yahay: 157000 $
Dib u bixinta Tirada bilaha: 36
Qeybta: Nadiifinta qallalan
Tilmaanta franchise ee franchisor: Nadiifiyeyaasha qalalan ee Isbaanishka iyo xashiishadda dharka lagu dhaqo, waxay ka bilaabatay Madrid 1994. Illaa maanta, shirkaddu waxay si guul leh ugu hormarineysay fikraddeeda ganacsi 23 dal oo ku yaal shan qaaradood, oo hadda waxay isu dejisay hawsha horumarinta shabakadeeda suuqa Belarus. Pressto wuxuu Belarus u aqoonsaday suuq rajo leh oo leh qaab ganacsi oo la isku daray sida Pressto, halkaas oo adeegyo tayo sare leh ay si joogto ah ugu kordhayaan baahida. Marxaladdan horumarinta suuqa franchising -ka ee Belarus, baahida loo qabo dhaqidda iyo adeegyada nadiifinta qallalan ayaa sii kordheysa. Waa maxay sababta wareejinta Pressto ay tahay maalgashiga ganacsiga ugu fiican. Qaar ka mid ah guusha weyn ee Pressto waxaa loo aanayn karaa siyaabo kala duwan, laga bilaabo xalal u gaar ah nooc kasta oo nadiifin qallalan ah si loogu habeeyo adeegyo badan hal dhar dhaqid. Pressto waxay bixisaa fikrad ganacsi oo cusub oo ku salaysan hal -abuurnimo joogto ah iyo hababka cilmi -baarista.
Maalgashi ayaa loo baahan yahay: 8000 $
Dib u bixinta Tirada bilaha: 8
Qeybta: Dukaan alaab ah, Dukaan tafaariiqle
Shirkadda Makey waxay si guul leh u horumarinaysay in ka badan 20 sano waxaana si sax ah loogu tixgeliyaa inay tahay mid ka mid ah soosaarayaasha ugu sarreeya ee haberdashery maqaar oo tayo sare leh, qalabka ganacsiga iyo alaabada gudaha. Waxaan u mahadcelineynaa farsamoyaqaannadeenna waana ku faani karnaa, maxaa yeelay waxay ugu mahadcelineysaa dadaalladooda in astaantayadu ay noqotay mid la garan karo, iyo alaabtu waxay ku jiraan dalab joogto ah ma aha oo kaliya Belarus, laakiin sidoo kale dibedda. Tani, si kastaba ha ahaatee, waa dabiici, maxaa yeelay shirkadeena waxay shaqaaleysiisaa sayidyo hibo leh waxbarasho farshaxan sare. Makey Franchise "Makey" waa dalab u gaar ah suuqa franchising ee hadiyadaha maqaar -gacmeedka dhabta ah ee gacanta lagu sameeyo. - Waxaan bixinnaa xalal diyaarsan oo lagu bilaabayo meherad, ugu soo jiidasho badan xagga maal-gashiga, oo leh qiime-celin aad u fiican. Makey - Waxaan kaa caawinaynaa inaad hesho meel ku habboon tafaariiqda tafaariiqda. Waxaan bixinnaa sawir gacmeedyo iyo ikhtiyaarrada ugu wanaagsan ee goobta qalabka ganacsiga.
Lacag bilow ah: 4500 $
Maalgashi ayaa loo baahan yahay: 4000 $
Dib u bixinta Tirada bilaha: 6
Qeybta: Xarunta waxbarashada carruurta, Koritaanka ilmaha
Xarunta horumarinta carruurta ee Lesenka waa adduunyo mucjisooyin iyo sheekooyin sheekooyin ah, helitaankii ugu horreeyay iyo aqoonta ilmaha. Fasalka dhexdiisa ee Xarunta Horumarinta Carruurnimada Hore, carruurtu waxay muujiyaan kartidooda iyo hal -abuurkooda, waxayna kobciyaan adduunkooda dareenka. Waa maxay franchisee-ka Lesenka ee lagu helo lacag isku-jir ah: kaalmeynta abaabulka xarunta horumarinta carruurta (shuruudaha dhismaha, qorshaha furitaanka, liiska qalabka, u hoggaansanaanta shuruucda iyo farsamooyinka, agabyada iyo faa'iidooyinka qiimaha jaban, abaabulka shaqada) ; qorshe ganacsi ee xarunta muddo laba sano ah; caawimaad xagga xulashada iyo qiimeynta shaqaalaha; tababarka iyo tababbarka la taaban karo ee shaqaalaha iyada oo lagu saleynayo xarumaha jira; barnaamij tababar oo gaar ah oo sameeya faa'iido tartan; taageerada joogtada ah; barnaamijyada dhiirrigelinta iyo suuqgeynta;
Maalgashi ayaa loo baahan yahay: 10800 $
Dib u bixinta Tirada bilaha: 12
Qeybta: Dukaan alaab ah
Tilmaanta franchise -ka ee franchisor -ka: EUROCECHOL franchise waa fursad aad ku bilaabi karto ganacsi faa'iido kuu leh oo leh maalgashi aad u yar! Iibsadahaaga suurtagalka ah wuxuu ku nool yahay albaab kasta gadaashiisa, maxaa yeelay way adag tahay in la qiyaaso xafiis, aqal, guri, dacha, maqaaxi ama makhaayad aan lahayn alaab dahaadh leh. Tusaale fudud oo ah xisaabinta awoodda suuqa ee Eurocovers ee magaaladaada: Aan dhahno tirada dadka magaaladu waa 300,000 oo qof, celceliska qoysku waa 4 qof. Wadarta: 75,000 qoys. Sida laga soo xigtay saadaasha ugu liidata, kaliya 2% qoysaska ayaa macmiil kuu noqon doona muddo sannad gudaheed ah, taas oo ah 1,500 jeeg. Celceliska jeegga dukaamadeenna waa USD 123, USD 184,300 celcelis ahaan dakhli sanadeed, i.e. $ 15,360 bishii. 2% ee soo socda ayaa noqon doona iibsadayaashaada sannadka soo socda, iyo wareegga iibsashada soo noqnoqda ee Eurocovers waa celcelis ahaan 3-5 sano. Eurocovers Franchise Eurocovers waa: 1. Badeecado gaar ah Shirkaddu waa qaybiyaha gaarka ah ee Eurocovers ee Ruushka.
Horay u soco
Si aad u iibsato xayeysiin waa wax iska fudud, waxa ugu muhiimsan waa in la doorto qaabka ganacsiga ee kugu habboon. Waad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad u baahan tahay xayeysiinta, maxaa yeelay, sida caadiga ah, waxaa lagu siiyay dhammaan xannibaadda macluumaadka ganacsi ee bilowga ah. Si aad u iibsato xayeysiis sidoo kale waa faa'iido maxaa yeelay waxaad bilaabi kartaa ganacsi keenaya faa'iido heer sare ah iyada oo aan wax kharash ah oo suuq ah ah. Iibiyaha ayaa ku siinaya dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay si aad u bilowdo inaad lacag ku sameyso waqtiga rikoorka. Kaliya waxaad ubaahantahay inaad iibsato xayeysiin oo aad ku raaxeysato dhammaan khibradaha ay sameeyeen dad kale muddo dheer kahor intaadan go'aansan inaad gasho meheraddan. Dabcan, waxaad u baahan tahay inaad hesho xuquuqaha ku habboon danahaaga iyo awoodahaaga. Tusaale ahaan, haddii aadan haysan lacag aad ku furto silsiladda makhaayadda, markaa ma awoodi doontid inaad iibsato xayeysiis. Dabcan, shirkadaha bixiya fursad ay ku helaan rukhsad hubinta iibsadayaasha suurtagalka ah, iyo khaladaadka ku jira hawshan runtii waa dhif. Haddii aad go'aansato inaad hesho xayeysiin, markaa waxaad tahay shirkadda 'franchisee', iibsadaha tooska ah ee qaabkan ganacsi.
Waad noqon kartaa ganacsade oo waxaad isticmaali kartaa magac qof walbaaba horey u maqlay. Waxaad sidoo kale heleysaa fikrad diyaar ah oo waxba ha ka abuurin shey gabi ahaanba banaan. Ruushka, ruqsad bixinta ayaa caan ku noqotay muddo dheer iyo 2021 waa mid ka mid ah moodooyinka ganacsiga ee u muuqda inay bixiyaan lacag fudud maalgashiga ka dib. Wax walbaa sidaa uma fududaan, hase yeeshe, iibsashada xuquuqaha weli way ka fududdahay ka abuurista ganacsi meel hoose. Ka fogaanshaha kharashka soo saarista astaan, baabi'inta baahida loo qabo in la ikhtiraaco qaabkaaga iyo naqshadeyntaada, dhammaantood waxay fududeynayaan in laguu diro qaabka ganacsigaaga. Waa ku filan tahay kaliya in la iibsado aqoonta lagama maarmaanka ah loona isticmaalo si dhakhso leh loo kordhiyo mugga dakhliga miisaaniyadda.
Iibsashada xayeysiis micnaheedu maahan marwalba in si joogto ah loo iibsado. Waad kireysan kartaa fursadda aad ku adeegsan karto sumadda iyo dhammaan qalabka la socda in muddo ah. Badanaa, shirkaduhu waxay bixiyaan khidmad isku darka ah. Qaadhaan-lacageed isku-dhafan ayaa loo fahmay inay tahay fursad lagu isticmaalo nooc ka mid ah waxqabadka ganacsiga, qaab ganacsi oo hore u jiray, si loo kasbado ilaha dhaqaalaha. Waad ku matali kartaa magacaaga, waxaad isticmaali kartaa tikniyoolajiyadda jira, waxaad cuni kartaa alaabta ceyriinka ah ee lagu siiyay, waxaadna dalban kartaa astaan ganacsi ama summad. Waxay si fiican ugu shaqeysaa ku dhowaad goob kasta iyo waddan kasta. Si kastaba ha noqotee, waxaa laga yaabaa inaadan had iyo jeer awoodin inaad iibsato xayeysiin oo aad ku horumariso gobolkaaga. Waa lagama maarmaan in si taxaddar leh loo barto suurtagalnimada ku shaqeynta sumaddan iyo moodeelkan ganacsi deegaan maxalli ah. Haddii aad go'aansato inaad iibsato xayeysiis, markaa badanaa waa lagama maarmaan in wax laga beddelo qaabka jira.
Tani waxay noqon kartaa ku darista wixii faahfaahin yar ah, gaar ahaaneed, taas oo dabeecad u ah kaliya gobolkaaga. Waxay bixisaa xitaa macaamiil badan oo qulqulaya oo noocaas oo kale ah ayaa loo isticmaali karaa qayb ka mid ah ololaha xayeysiinta. Markaad go'aansato inaad iibsato xayeysiin, waxaad u baahan tahay inaad isla markiiba wax ka qabato si maalgashiga uu u bixiyo. Xuquuqda lahaanshuhu sidoo kale wuxuu noqon karaa nooc ka mid ah kirada alaabada ganacsiga. Sida caadiga ah, heshiis gaar ah ayaa la dejinayaa inta u dhexeysa xayeysiinta iyo shirkadda. Tani waa habka loo iibsado xayeysiinta. Adiga ayaa ku hogaaminaya qandaraaska fulinta shaqada xafiiska ganacsigaaguna kor ayuu u kacayaa.
Waxaan kugula talineynaa inaad si sax ah u iibsato xuquuqaha aad xiiseyneyso ee aad kula macaamili karto wax soo saar, iyo sidoo kale inaad ka faa'iideysato maalgashigaaga. Franchisor wuxuu kaa helayaa lacag-bixinno adeegsiga astaan-ganacsiyeed ama aqoon-sida loo yaqaan. Sidoo kale, keenista alaabada ceeriin badanaa waxaa lagu bixiyaa qandaraaska. Qeybaha habraaca, tababarka shaqaalaha, waxaas oo dhan waxay ku jiraan qandaraaska. Waa ku filan tahay inaad iibsato xuquuqda u dhiganta. Waxaad ka heli kartaa rukhsad si aad uga faa'iideysato dhammaan khiyaanooyinka la yaqaan ee laguguugu soo gudbin doono iibiyaha. Shuruudaha isticmaalka sumadda badeecada sidoo kale si shaqsi ah ayaa looga xaajoodaa. Waxay noqon karaan kuwo bilaash ah iyo kuwo adag, waxay kuxirantahay hadba hadafyada ay daba socdaan labada dhinac. Xaqiijiyuhu wuxuu bixiyaa khidmadaha la siiyay xaq u lahaanshaha ganacsi isagoo adeegsanaya qorshaha uu adeegsanayo.
Waad iibsan kartaa oo keliya xuquuqda aad ku shaqeyn karto astaanta laakiin sidoo kale waxaad ka iibsan kartaa dhammaan aqoonta dheeraadka ah, teknoolojiyada, iyo noocyada kheyraadka ee aad u baahan karto inta lagu jiro hawlgallada milatari.
Dukaanka xayeysiinta waa nooc ka mid ah meheradaha halkaas oo noocyo kala duwan oo dalabyo noocyo ah la dhigo laantooda si looga furo magaalo kale ama waddan kale. Dukaanka noocan ah waxaa isticmaali kara dadka doonaya inay horumariyaan ganacsigooda. Dukaanka noocan oo kale ah waxaa lagu gartaa joogitaanka tiro badan oo dalabyo kala duwan ah qaabka hadda jira. Haddii aad xiiseyneyso xayeysiisyada, markaa waxay ku taal dukaan qaas ah oo qaab ah oo ay tahay inaad raadsato. Waa muhiim in dukaankan oo kale uu leeyahay tirada lagama maarmaanka u ah dalabyada ku habboon, haddii kale, wax dhib ah kuma jiraan. Franchise iyo sharraxaaddooda waa in la siiyaa fiiro gaar ah, dukaankuna wuxuu awood u leeyahay inuu ka caawiyo dadka doonaya inay helaan fursad ay ku fuliyaan qaar ka mid ah howlaha ganacsiga sida ku xusan qorshaha hadda jira.
Xuquuqda lahaanshuhu waa hanaan gaar ah ama gabi ahaanba qaybo kala duwan oo iibsaduhu u helo inuu iska furo oo uu kaligiis kor u qaado. Isla mar ahaantaana, shirkadda iibisay xayeysiinta ayaa iska caawisa. Aad ayey u habboon tahay in la isticmaalo dukaan ay ku yaalliin alaabada noocaas ah si aad u doorato midka ugu habboon. Tusaale ahaan, maal-gashade wuxuu u baahan yahay inuu la wareego ilaha dhaqaalaha oo wuxuu doonayaa inuu ka faa'iideysto nooc gaar ah oo horay looga yaqaanay adduunka oo dhan. Maalgashaduhu wuxuu tagayaa dukaanka oo wuxuu doortaa badeecada ku habboon isaga. Haddii dukaanku leeyahay sharaxaad faahfaahsan oo ku saabsan lahaanshaha, markaa waxaad isla markiiba go'aan ku gaari kartaa isla goobta. Xaaladaha inta badan si shaqsi ah ayaa looga hadlaa, oo markii rukhsadda uu iibsaduhu ka iibsado kaliya dukaanka dhexdiisa, tartan ayaa la qabanqaabin karaa. Tani waa shuruud si macaamilku u doorto midka ugu fiican.
Dukaan casri ah waa inuu u shaqeeyaa si bilaa cillad ah, maadaama ay tani tahay ganacsi aad u culus. Shirkado badan oo raba inay galaan suuqyada deriska ah ayaa awood u leh inay ka helaan dukaankaan. Waxaad ka heli kartaa rukhsad kasta oo aad jeceshahay haddii aad aado bakhaar sidan oo kale ah. Tani waa mid aad u habboon tan iyo markii dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka ah lagu bixiyo hal goob. Mideynta dhammaan rukhsadaha la galiyay hal madal waxay noqoneysaa dhab ahaan bakhaar siiya fursad lagu iibsado alaabada ugu habboon marka loo eego dejinta shuruudaha. Haddii aad u baahan tahay meel bakhaar ah, ka dib boggaas oo kale waxaa laga heli karaa internetka. Intaa waxaa sii dheer, sida ugu wanaagsan ee dukaanka loo helo, ayaa waxaa sii badan xayeysiisyada. Tiro badan oo soo jeedin ah ayaa siineysa fursad wanaagsan oo lagu sameeyo xulashada saxda ah.
Sharaxaad faahfaahsan oo ku saabsan rukhsadda ayaa kaa caawinaysa inaad fahamto haddii ay ku habboon tahay doorbidkaaga iyo inay suurtagal tahay in lagu horumariyo gobol gaar ah. Dukaanka dhexdiisa, waxaad awoodi kartaa inaad isbarbar dhigto fursado kala duwan. Natiijo ahaan, waxaa suurtagal ah in la doorto midka ugu fiican. Waad ku mahadsan tahay dukaanka mudnaanta leh, ganacsatada doonaya inay maalgashadaan ilaha maaliyadeed ayna adeegsadaan sumad jirta oo caan ah oo awood u leh inay si dhakhso leh oo karti leh u fuliyaan qorshayaashooda. Waa inuu jiraa marin fudud oo lagu helo xuquuqaha saxda ah. Bakhaarka noocan oo kale ahi wuxuu ku shaqeeyaa internetka, sumcadda noocyadaas la dul saarayna waxay kuxirantahay deggenaashiisa iyo nabadgelyadiisa. Caadi ahaan, keydka noocan oo kale ah waa inuu buuxiyaa dhammaan shuruudaha amniga oo uu haystaa shahaadooyinka lagama maarmaanka ah. Bakhaarka casriga ahi waa inuu had iyo jeer bixiyaa macluumaad dhammaystiran oo ku saabsan alaabooyinka ay bixiso. Dukaanka xayeysiintu waa mid aan ka reebanayn maxaa yeelay waa inay buuxisaa shuruudaha xaaladaha casriga ah.
Thanks to barxad noocan oo kale ah, waxaad si wax ku ool ah ula macaamili kartaa wakiillada noocyo kala duwan. Xitaa waa suurtagal in laga wada hadlo haddii dukaanka xayeysiinta si wanaagsan loo qaabeeyey.
Markaad dooranaysid dukaanka xayeysiinta, waxa ugu muhiimsan maahan inaad qalad sameyso, maadaama tani ay tahay hawlgal ganacsi oo aad muhiim u ah, maxaa yeelay maal-galiyaha ayaa dooranaya aagga uu ku maal-gelin doono ilaha lacagta. Dukaanka xayeysiintu wuxuu siiyaa qof walba wax ku ool ah dalabyo kala duwan. Franchise waa la hagaajin karaa iyada oo la tixgelinayo waxyaabaha gaarka u ah gobolka. Badanaa, kani waa mid fudud oo waa sharraxaad faahfaahsan oo ku saabsan shuruudaha uu iibiyuhu u siinayo iibsadaha waa in lagu siiyaa dukaanka dhexdiisa. Tallaabooyinka noocan ahi waxay u oggolaanayaan ganacsade suurtagal ah oo doonaya inuu ku lug yeesho xayeysiinta si uu go'aan sax ah uga gaaro qorshaha noocan oo kale ah.
Buug-yaraha xayeysiintu waa liistada soo-jeedimaha horumarinta ganacsiga ee hadda jira oo ku saleysan nooc caan ah oo jira. Diiwaanka noocan oo kale ah waxaa isticmaali kara ganacsade doonaya inuu maalgashado ilaha maaliyadeed isla markaana aan doonayn inuu horumar ka sameeyo ganacsi laga soo bilaabo meel isla markaa ah. Buug-gacmeedka ayaa ku habboon qofka noocaas ah. Xuquuq kasta oo suuqa ku taal halkan ayey ku qoran tahay. Waad ku mahadsan tahay buug-gacmeedka noocaas ah, waxaa suurtagal ah in la doorto kuwa ugu jecel iyo kuwa ugu habboon. Buug-yaraha noocan oo kale ah wuxuu kaloo suurtogal ka dhigayaa in si dhaqso leh loola xiriiro iibiyaha oo la waydiiyo su'aalo xiisaha leh Marka la eego qaabka buug gacmeedka, kaliya maahan dhammaan dalabyada khuseeya waa in la soo bandhigaa, laakiin sidoo kale sharaxaadda nooca noocan ah waa in la helaa. Thanks to sharaxaadda, waxaa suurtagal ah in la sameeyo go'aanka maaraynta ugu saxsan uguna kartida badan. Si fudud kuma sameyn kartid liistada liis garaynta haddii macaamil macquul ah uu doonayo inuu doorto ikhtiyaarka ugu habboon.
Buugyaraha xayeysiinta ee bilaashka ah ama la bixin karo waxay kuxirantahay mulkiilaha goobta. Isla mar ahaantaana, rukhsadaha laftoodu waxay bixiyaan lacagta suurtagalnimada ee lagu dhajinayo bogga noocan oo kale ah ama aaladda faafinaysa aaladda kale. Waad ku mahadsan tahay buug gacmeedka 'franchise', waxaa suurtagal ah in la soo jiito iibsadayaal cusub. Iibsadaha iibsashada waxaa loo yaqaan 'franchisee'. Wuxuu fursad u helaa inuu ganacsi ku sameeyo sida ku cad qorshaha hadda jira, ee la siiyo macaamilka. Qorshahan waxaa soo diyaariyay shirkadda 'franchisor', halka qaybta iibka lafteeda ay sidato dhammaan kharashyada diyaarinta ee loo baahan yahay, bilaabista, iyo howlaha waxqabadka ee shayga ganacsiga. Tani waa mid aad ugu habboon dadkaas fursad u haysta inay maalgashadaan ilaha maaliyadeed laakiin aan rabin inay ikhtiraacaan wax cusub. Waxay qaataan rukhsad diyaarsan, taas oo aad ugu habboon iyaga. Dhinaca kale, buugga ayaa kaa caawinaya inaad doorato, sameyso go’aanka ugu saxsan maaraynta, iyo inaad ka hesho dakhliga ugu badan ee ka soo xarooda maalgelinta la geliyay.
Buug-yaraha xayeysiinta gudahood, waxaad ku caddeyn kartaa cabbirka lacagta isku-darka ah. Tani waa qiimaha faransiisnimada, oo go'an oo ay rukhsaddu ka hesho faransiiska marxaladda ugu horreysa. Tani waxay noqon kartaa ku dhowaad 10% wadarta kharashyada bilowga ah. Isla mar ahaantaana, qaabdhismeedka buug gacmeedka, waxaad ku qeexi kartaa faahfaahinta sharaxaya shuruudaha isdhexgalka xitaa si faahfaahsan. Tusaale ahaan, buug loogu magac daray buuga ganacsiga waxaa lagu bixin karaa gunno ahaan. Ma aha wax kale oo aan ahayn sharci-dejin wax ku ool ah oo qiraya abaabulka howlaha sida ugu wax ku oolka badan. Isla hawlgalka ayaa loogu talagalay in lagu dhiso aqoonsi shirkadeed, bilaabida xayeysiin, iyo hawlo kale oo la xiriira isdhexgalka macaamiisha. Buugga loogu yeero magaca ayaa kaa caawinaya inaad dhex dhexaadiso sida saxda ah ee loola macaamilayo macaamiisha mustaqbalka. Kaliya inta lagu gudajiro liistada xayeysiinta, qodobadan waa in lagu sharaxo si faahfaahsan tanina waxay ka caawinaysaa macaamil macquul ah inuu qaato go'aanka saxda ah.
Haddii liistada liisanka 'franchise' ay tahay mid casriyeysan, markaa waxay liis garaynaysaa dhammaan dalabyada hadda jira iyo macaamiisha mustaqbalka waxay heli karaan kuwa ugu fiican iyaga. Buug-yarahaan noocan oo kale ah ayaa u oggolaanaya iibinta xayeysiisyo badan maxaa yeelay dhammaantood waxay ku yaalliin hal goob. Buugga buuggu waa inuu ahaadaa mid si wanaagsan loo qaabeeyey oo si fiican loo hagaajiyey. Tallaabooyinka noocan oo kale ah waxay fududeeyaan socodka waxayna ka dhigayaan adeegsiga buugga sida ugu wax ku oolsan uguna farxsan habka macaamilka. Haddii aad u baahan tahay buug-yare, waxaa fiican inaad si hufan oo karti leh u soo ururiso. Franchise waa in la siiyaa feejignaanta lagama maarmaanka ah si loo hubiyo in khaladaad maadi ah aysan ka soo bixin sharraxaaddooda. Waad ku mahadsan tahay liiska buug-gacmeedka, macaamiil badan oo suurtagal ah ayaa awood u leh inay helaan iibiyeyaashooda ganacsiguna wuxuu bilaabi doonaa inuu horumariyo, dhammaan laamaha cusubi waxay ka furmi doonaan magaalooyinka iyo waddamada deriska ah.
Buug-gacmeedka wax-ku-oolka ah ee xayeysiinta waa in lagu qalabeeyaa marin habeyn ku habboon isticmaalaha si uu u helo xalka ugu habboon. Waad ku mahadsan tahay buug-gacmeedka macaamiil kasta oo macaamil ah wuxuu awood u leeyahay inuu la macaamilo waxqabadyada wadaad kasta iyada oo qayb ka ah helitaanka macluumaadka iyaga ku habboon.
Ganacsi xayeysiis waa in lagu hor mariyaa xeerarka uu iibiyaha siiyay. Iibiyaha waxaa haddii kale loogu yeeraa franchisor wuxuuna ku kala duwan yahay taas xaquuqda looga faa'iideysanayo ogaanshaha ama astaamaha ganacsiga, wuxuu ka helaa qaddar lacag ah waxa loogu yeero xayeysiinta. Isla sidaas oo kale, ayaa waajib ku ah inay bixiso tabarucaada, taas oo loo wareejiyay xuquuqda lagu qabanayo ganacsiga iyadoo la adeegsanayo qorshaha la bixiyay. Qorshaha waxaa soo saaray wakiillada shirkadda, halka dhammaan kharashyada ku baxaya furitaanka iyo diyaarinta ganacsigana uu qaadayo qofka iibsadaha ah laftiisa.
Xuquuqda lahaanshaha, dhinaca kale, waa nidaam si hufan u shaqeynaya oo si faahfaahsan u sharraxaya dhammaan geeddi-socodka, xaaladaha, iyo dhinacyada, kaas oo u oggolaanaya qabashada ganacsi sida ugu hufan. Isla mar ahaantaana, geeddi-socodka ganacsigu waa inuu si adag ugu hoggaansamaa codsiyada franchisor. Markaa ka dib ayaa rukhsaddu u noqotaa mid wax ku ool ah intii suurtagal ah, ganacsigana waxaa la siiyaa xaddiga dareenka uu u baahan yahay. Ganacsatada ugu guuleysiga badan waxay awoodaan inay si buuxda u nuquliyaan howlaha wadaadada, qaarkoodna xitaa waxay sameeyaan horumarintooda. Hawlgal kasta iyo xitaa isbeddelada waxaa lagala hadlayaa iibiyaha, maadaama kuwani yihiin xeerarka.
Ka dib dhammaadka heshiiska, waxaa suurtagal ah in la bilaabo ganacsi iyada oo la adeegsanayo rukhsad bixin. Tallaabooyinka noocan ahi waxay u oggolaanayaan macaamilka inuu si dhakhso leh uga faa'iideysto maalgashiga maxaa yeelay sharciyeynta shirkaddu waa wax aan ka badnayn maalgashiga ilaha maaliyadeed ee qaab jira, si fiican u horumarsan, lana xaqiijiyay. Moodelkan ganacsi wuxuu u oggolaanayaa si hufan u qabashada howlaha xafiiska, iyadoo la tixgelinayo waxyaabaha gaarka u ah gobolka. Mararka qaar xayeysiintu si fudud uma shaqeyneyso haddii howlaha ganacsi si qaldan loo dhisay ama meelaha ku hareeraysan aysan u dhigmin kii ka jiray dhulkii mashruuca.
Ganacsi xayeysiis ah ayaa maalin walba lagu arki karaa waddooyinka magaalooyinkaaga. Waxay noqon kartaa kafateeriyaal kasta, dukaan, tima-jare, ama urur kale. Xitaa McDonald's iyo KFC waa xayeysiisyo leh heerar heer sare ah oo caan ah. Dhammaan furitaanka xayeysiinta iyo sameynta ficilada ganacsi ee ka dambeeya qorshaha waxaa lagu qoray qandaraaska. Heshiiska waxaa lagu soo gabagabeeyey in lagu jaangooyo dhammaan khilaafaadka iyo in mid kasta oo ka mid ah dhinacyada uu ogaado xuquuqdiisa iyo waajibaadkiisa. Haddii aad dooneysid inaad sameysid ganacsi xayeysiis ah, waxaa habboon inaad doorato nooca ugu habboon ee ganacsi. Sidoo kale, iyadoo la tixgelinayo waxyaabaha gaarka u ah waxqabadka ka jira gobolkaaga waa wax aad muhiim u ah. Tusaale ahaan, waxaan tixgelin karnaa iibinta canjeelada ee McDonald's ee Ruushka. Fursadda casriga ah ee lagu socodsiinayo ganacsi xayeysiis ah waxay siinaysaa fursado guul oo aan xad lahayn oo dadkaas haysta ilaha dhaqaale ee bilaashka ah ee doonaya inay si hufan u maalgashadaan.
Ganacsi noocan ahi wuxuu ka waxtar badan yahay kor u qaadista sumadda meesha ugu hooseysa. Ganacsade gaar ah ayaa horeyba ugu guuleystey inuu horumariyo noocaan oo kale isla markaana uu la wadaago khibradiisa boqolkiiba cayiman. Tani waa mid aad u habboon tan iyo markii ganacsiga aasaasiga ahi uu ku siinayo fursad aad u fiican oo aanad soo saarin wax cusub, laakiin aad u adeegsato ikhtiyaar guuleysi jira Ganacsi noocan oo kale ah wuxuu si hufan u shaqeynayaa haddii dhammaan howlaha wax soo saar loo fuliyo iyadoo la raacayo qawaaniinta ku xusan qandaraaska. Ganacsi lahaanshuhu wuxuu ku kobcayaa xawaare la dardar geliyey haddii isbeddelada lagula heshiiyo iibiyaha, kaas oo tixgelin doona waxyaabaha gaarka u ah gobolka.
Kuwa doonaya inay bilaabaan ganacsi xayeysiis ah, degel gaar ah, buug-gacmeed, ama dukaan ayaa loo baahan yahay, halkaasoo dhammaan dalabyada hadda ka jira suuqa lagu bixiyo. Iyada oo gacan laga helayo buug-gacmeedka noocan oo kale ah, waxaad si fudud u dooran kartaa ikhtiyaarka ugu habboon. La shaqee ganacsi xayeysiis ah, adoo dooranaya jihada ugu habboon ee aad si wax ku ool ah ula qabsan karto hawsha gacanta ku haysa. Thanks to ganacsiga xayeysiinta oo keliya, dad badan ayaa si weyn u kordhiyay raasamaalkooda bilowga ah. Ka dib markaad maal gashato ganacsi ganacsi, waxaad rajeyn kartaa inaad hesho dakhli sare. Soo noqoshada maalgashigan badanaa waa mid aad u sarreeya. Tani waa waxa hubiya heerka sare ee caan ka ahaanshaha ganacsiga noocan ah. Dad badani waxay rabaan inay maalgashadaan ilaha dhaqaalaha qaab ay horayba u tijaabisay oo loo sifeeyay sanadihii la soo dhaafay.
La wadaag asxaabtaada ama keydso cinwaanka boggan naftaada
Maamulka goobta: info@FranchiseForEveryone.com
Youtube Kanaalka wararka
Haddii aad aragto khalad, si aad u saxdo, dooro qoraalka khaldan ee jiirka leh oo riix furaha Gelitaanka
Haddii aad aragto khalad, guji halkan si aad u saxdo